Sidee loo qaabeeyey Kooxaha Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Sidee loo qaabeeyey Kooxaha Warbaahinta Bulshada
Axad, Janaayo 27, 2013 Douglas Karr
Faahfaahintan ka socota GO-Gulf.com waxay qabataa shaqo weyn oo muujineysa kala duwanaanta ballaaran ee sida kooxaha warbaahinta bulshada u shaqeeyaan.
Baro inta dadaal ee ganacsiyada ay gelinayaan ololahooda warbaahinta bulshada. Immisa qof oo ay u shaqaaleeyeen ololahooda warbaahinta bulshada, maxay yihiin tayada loo shaqeeyeyaashu ka raadiyaan khabiirada baraha bulshada iyada oo loo marayo faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Sida Ururadu u qaabeeyaan kooxahooda warbaahinta bulshada. Laga soo bilaabo bogga 'Go-Gulf infographic', Sidee Ururadu u qaabeeyaan Kooxaha Warbaahinta Bulshada.
Si qoto dheer uga sii qodid xog-ururintan waxaadna arki doontaa dhowr sawir oo dhalaalaya… sida xaqiiqda ah in 13% shirkaduhu aysan ku faraxsanayn qalabka la heli karo. Ama in 45% ka mid ah shirkadaha ay adeegsanayaan warbaahinta bulshada si ay u soo saaraan hoggaanno, laakiin keliya 13% ayaa dhab ahaantii cabiraya beddelaadda! Weli waxaan haynaa qaabab aan ugu gudubno warshadan!
Tags: warbaahinta bulshadakooxaha warbaahinta bulshadaqaabdhismeedka kooxda